तीन सय नेपाली पानीट्यांकी नाकामा अलपत्र « Janata Samachar
तीन सय नेपाली पानीट्यांकी नाकामा अलपत्र
प्रकाशित मिति : 23 March, 2020 8:09 pm
भद्रपुर । पूर्वी नाका काँकडभिट्टा भएर स्वदेश फर्केका करिब तीन सय नेपाली भारतीय नाका पानीट्यांकीमा अलपत्र परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनुसार आज बिहान १० बजेदेखि सीमानाका बन्द भएपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन् । तिनमा भारतका विभिन्न शहरबाट मजदूरी गरेर फर्कने तथा विद्यार्थी छन् ।
त्यसैगरी नेपालका विभिन्न शहरबाट मजदूरी गरेर घर फर्कने करीब तीन सय भारतीय काँकडभिट्टा नाकामा अलपत्र परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएसम्म आफूले केही गर्न नसकिने जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरको टोली काँकडभिट्टा नाका निरीक्षणका लागि आउँदै हुनुहुन्छ । जिल्ला ट्रभाल सङ्घ झापाका अध्यक्ष नेत्र कार्कीले सरकारले सही निर्णय गरे पनि समय छोटो भएका कारण नाकामा दुवै देशका नागरिक अलपत्र परेको बताउनुभयो ।
विराटनगर । प्रदेश १ मा वेड संख्यासंगै क्वारेन्टाइनमा बस्ने सर्वसाधारणको संख्या पनि थप भएको छ
विराटनगर । प्रदेश १ को कोरोना जनसुरक्षा कोषमा मंगलबार थप रु. २० लाख जम्मा भएको
काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बिरुद्ध खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने
कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन बाहेक के के गर्दैछ ?
काठमाडौं । विश्वका २ सय ८ राष्ट्रलाई यतिखेर कोरोना संक्रमणले सताइरहेको छ । चीनको वुहान